Permalink Reply by u myo aung on June 22, 2011 at 9:32
Indeed! How should we initiate about it? It is our urgent need. Please, let's all put our heads together to make it right.
Permalink Reply by 3tg0k2z475aaj on June 21, 2011 at 18:23
Permalink Reply by 22s8hhyfpy9jj on June 22, 2011 at 17:09
We needareform for the whole education system. There is one thing more important than that is to recondition all the teachers. It can bearevolution. But it should beawise and fair revolution. Now we are in the deep educational crisis. To change all these things, we all have the responsibility. But we have no right. However we have stillahope. Whether our hope would be fulfilled or not depends only on ourself. I believe so. I amaburmese. I must love my country under any circumstances asacitizen of Myanmar. All we can do is just to play in the role where each one reach now.
Permalink Reply by thet thet aung on June 22, 2011 at 23:22
Only when students see the goodness of education with their eyes,they want to learn with heart and soul in their classrooms.I mean if educated people can earnalot of money,students want to continue their learning.So senior officials of our country should take education sector as the first priority and encourage educational staff such as teachers to be qualified with enough salary and facility.Only then can they do their teaching without any worry for her personal living.Asaresult,they can devote themselves to teaching with high quality by reading books and doing research for teaching.Needless to say those qualified teachers can produce qualified students.RIGHT!!!!!!
Permalink Reply by May Myat Thu on June 23, 2011 at 14:30
ွှThank you so much for sharing :-)
Permalink Reply by May Myat Thu on June 23, 2011 at 14:31
Permalink Reply by 110s4yhj9fpex on June 23, 2011 at 16:46
မြန်မာနိုင်ငံမှဆရာ၊ ဆရာမများ နားလည်လုပ်ဆောင် နိုင်ကြပါစေ။ အသပြာ ဆရာ၊ဆရာမ များပပျောက် ပါစေ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူကြီးများ ကူညီ ဖေးမပေးနိုင်ပါစေ။ ကလေးငယ်များ ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ပါစေ။ ဒီ post လေးကို ဖတ်ပြီးဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။ ရေးသားသူ အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Permalink Reply by 0sbq9q91qe0kq on June 25, 2011 at 20:41
ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။ဇနီးဘွဲရမဟုတ်ရင် ခင်ပွန်းရာထူးမတက်ဘူးလို့ချမှတ်လိုက်တော့။ အသက်ကြီးတာင် အမြန်၁၀-တန်းကိုဖြေကြတယ်။ အာဏာလည်းရှိတော့ ဆရာမတွေကလည်း မျက်နှာခပ်နာနာနဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရတယ်။အောင်သွားပြီး ဘွဲ့ကလည်းအလိုလိုရလာ တယ်။ ပြီးတော့ဆရာပြန်လုပ် အရည်အချင်းရှိသူကို ကန်ထုတ် နောက်ဆုံးတော့ ယနေ့ ပညာရေး ခေတ်ပျက်ကြီးဖြစ်ပြီပေါ့။ အဲဒီလိုအပြစ်ရှိတဲ့ သူတွေက သူတို့သားသမီးကို နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းထားတယ်လေ။ဒီမှာရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ပေါ့။ပြည်သူတွေတော့ ကောင်းပါတယ်။
Permalink Reply by Ye Tun Thu on June 28, 2011 at 9:17
ပြောရ ရင်တော့ တော်တော်လေးကိုရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ် အစိုးရရဲ့ပညာရေးအသုံးစရိတ် က ၁% ကနေ ၂ % နှုန်းဘဲရှိ တော့သူများနိုင်ငံတွေထက်နောက်ကျတာ မဆန်းပါဘူး
ဒီနေရာမှာစကားမစပ် စင်္ကာပူ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း လီကွမ်ယု ၁၉၆၂ လောက် က သူ့နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပြောတဲ့ စကားလေး ပါ ၁၀နှစ်အတွင်း ဗမာပြည်ကို အမှီလိုက်မယ် အခုတော့ဘာမှပြောစရာတောင်မလိုတော့ပါ ဘူး
Permalink Reply by hein htet on June 28, 2011 at 9:37
Yes,i agree with you.i also want to improve our country's education.
Permalink Reply by Ko Soe Tha. on June 28, 2011 at 10:42
ဒီဆောင်းပါးလေးကိုတင်ပေးလို့ ကျေးဇူးင်ပါတယ်။ ဒါကိုဖတ်ပြီးတော့ ပြောချင်စရာတွေလည်းအများကြီးပါ။ အဓိကကတော့ စံချိန်စံညွန်း နဲ့ပတ်သက်လာရင် ဘယ်ကဏ္တကိုပဲကြည့်ကြည့်အတော်ယူကျုံးမရဖြစ်ရပါတယ်။ လူချင်းတူပါရက်နဲ့ တို့လူမျိုးမှရွေးပြီး နောက်ဆုံးရောက်သွားရတာကို။ တကယ်တော့ လူကြီး မိဘ ဆရာ သမားတွေဆိုတာ လူငယ်မျိုး ဆက်သစ် တွေအတွက် ဥယဉ်မှုး ကြီးတွေပါ။ ဥယဉ်မှုးဆိုတာ ဥယဉ်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ သစ်ပင် ပန်းပင်တွေလှပ ရှင်သန် ဖြစ်ထွန်းဖို့ ပြုစုပျိုးထောင်နည်းစနစ်ကို တတ်သိနားလည်ပြီး တကယ့်စေတနာအမှန်နဲ့ ပျိုးထောင်ပေးဖို့ကအဓိကပါ။ အတိုချုံးပြောရရင်တော့ ဥယဉ်မှုးများဟာ ဥယဉ်စောင့်သာသာပဲ ဖြစ်နေကြလို့ အဆင့်မမီ တဲ့ပန်းကလေးများဘ၀ ရောက်နေကြရတာပါ။ ပန်းကလေးများ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ပွင့်လန်းနိုင်အောင် စေတနာအမှန်နဲ့ ပျိုးထောင်ပေးနိုင်တဲ့ ဥယဉ်မှူးကေါင်းစိတ်ဓါတ်များမွေးမြူနိုင်ကြပါစေ....။